Git Sangit News » किन बच्चा बोकेकी महिलालाई इन्स्पेक्टरले लाठी बर्साए त ? हेर्नुहोस भिडियो ,
किन बच्चा बोकेकी महिलालाई इन्स्पेक्टरले लाठी बर्साए त ? हेर्नुहोस भिडियो ,
१६ फागुन, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका निरीक्षक देवीप्रसाद पौडेलले बच्चा बोकेकी महिलालाई लाठी हानेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सहायक रथी हेम खत्री र माला शाह नामक महिलाबीच भएको विवादका क्रममा पौडेलले अर्की महिलालाई लाठीचार्ज गरेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार पौडेलले बिहीबार दिउँसो आफूलाई अभियन्ता बताउने हेमा श्रेष्ठलाई लाठी हानेका हुन् । भिडियोमा देखिएका बेला उनी बच्चासहित छिन् । पौडेल महानगरीय प्रहरी वृत्त, भैंसेपाटीका इञ्चार्जको रुपमा कार्यरत छन् । अर्काको घरमा छिरेर र तोडफोड गरेपछि सामान्य बल प्रयोग गरेको पौडेल बताउँछन् ।
श्रेष्ठले आफूहरुलाई लाठीचार्ज गर्नुले प्रहरीको नियत प्रष्ट पारेको बताएकी छिन । महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुरमा भदौमा खत्रीले तीन महिलाले आफूमाथि कुटपिट गरेको भन्दै उजुरी दिएका थिए । मोबाइलसमेत लुटेर लगेको उनको दाबी थियो । उजुरीउपर सुनुवाई गर्ने क्रममा अन्य दुई जना भागे भने शाहसँग प्रहरीले सोधपुछ गर्‍यो ।
त्यस क्रममा शाह र खत्रीको सम्बन्ध सतहमा आयो र अनुसन्धानले अर्को मोड लियो । यो विषय प्रहरीमा पुग्नु अगावै शाहले सामाजिक सञ्जालमा त्यसबारे अभिव्यक्ति दिँदै आएकी थिइन् । शाहले खत्री आफ्नो श्रीमान भएको र दुई दशकदेखि सँगै बसेको दाबी गरिन् । त्यसैले नाता प्रमाणित गरिदिनुपर्ने उनको माग थियो । तर, खत्रीले द्वन्द्वको समयमा शाह आफ्नो एक जना सूचक मात्र भएको दाबी गरेका छन् । त्यसबाहेक कुनै सम्बन्ध नरहेको उनको दाबी छ ।
ललितपुर प्रहरीले दुवै पक्षलाई राखेर ६ पटकसम्म छलफल गरायो । महिलाले खत्रीलाई छोराछोरी पढाउन २० लाख रुपैयाँ पनि दिएको दाबी गरेकी छन् । त्यो पनि फिर्ता पाउनुपर्ने उनको दाबी छ । कानूनतः नाता प्रमाणितका लागि अदालत जानुपर्छ । यद्यपि, दुई पक्षबीच छलफलबाट कुनै निकास ननिस्किएपछि प्रहरीले घटनामा चासो दिन छाडेको थियो ।
अन्तिममा प्रहरीले शाहलाई कुनै वकिलको सहयोग लिएर अदालत वा महिला आयोगमा जान सुझायो । त्यसपछि खत्रीको घरमा आफूलाई मानवअधिकारकर्मी बताउने विभिन्न व्यक्तिले नियमितजसो धर्ना दिन थालेका थिए । बिहीबार पनि यही क्रममा महिलाको एक हुल युट्युबरसहित धर्ना दिन पुगेको प्रहरी अधिकृत बताउँछन् । भित्र छिरेर तोडफोड गर्न थालेपछि घरमा रहेकी छोरीले पूर्वजर्नेल खत्रीलाई खबर गरिन् । त्यसबेला खत्री अस्पतालमा थिए भने घरमा छोरी मात्र थिइन् ।
खत्रीले प्रहरीमा खबर गरेपछि इन्स्पेक्टर पौडेल नेतृत्वको टोली उनको घरमा पुगेको थियो । त्यसक्रममा उनले बल प्रयोग गरेका हुन् । बच्चासहित बसेकी महिलालाई लाठी हानेपछि अहिले प्रहरीको आलोचना भइरहेको छ । ललितपुर प्रहरीका प्रमुख एसएसपी टेकप्रसाद राईले घटनाबारे छानविन भइरहेको बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति १६ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ०९:२२